Soomaaliya oo qarka u saaran macluul kale - BBC News Somali
Soomaaliya oo qarka u saaran macluul kale
5 Maarso 2018
Image caption Xerada barakacayaasha ee Qansaxley ee ku taalla Dolow
Diblomaasiyiin ayaa ku sii qulquleya magaalada London oo lagu wado in lagu qabto shir ku saabsan arrimaha bani'aadanimada Soomaaliya, kaasoo lagu lafa gurayo dhibaato kusoo fool leh dad gaaraya 2.7 million oo Soomaali ah.
Hay'adda arrimaha Qaxootiga ee laga leeyahay Norway ee NRC ayaa ka digtay in haddii aan gargaar deg deg lala soo gaarin dadkaasi ay horssedi karta xaalad macluul oo mar kale Soomaaliya ku habsata.
''Bulshada Caalamka ayaa kal hore badbaadisay kumanaan kun oo qof oo ay soo food saartey abaar sanadkii hore, iyagoo sameeyey kahor tag inta aaney faraha kabixin xaaladdu'', ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay hay'adda.
Hey'addaha gargaarka ayaa doonaya in looggu yabooho $1.5 billion lacag gaareysa, si ay u fidiyaan barnaamijyo muddo socda oo lagu kaalmaynayo bulshada, si looga hortago in dhibaatooyin kale dhacaan.
Caruur lagu qiyaasay 300,000 oo ay da'doodu kayar tahay shan sano jir, ayaa waxaa haysata macluul.
''Inkastoo ay jirto abaar, haddana waxaa dhanka kale jira amni darro taasoo xaaladda uga sii dartey. In ka badan 1.1 million oo qof ayaa guryahooda isaga cararey kadib markii uu saameeyey dagaalo ay keeneen macluusha iyo abaarta'' ayay tiri NRC.